Xaqiiqooyinkii Aan Baranay Ka Dib Guushii Spain Ay Euro 2012 Kaga Qaaday Xulka Italy. - jornalizem
Xaqiiqooyinkii Aan Baranay Ka Dib Guushii Spain Ay Euro 2012 Kaga Qaaday Xulka Italy.
Qaar ka mid ah xaqiiqooyinka dhacay ka dib markii Spain ay 4-0 kaga qaaday koobka Euro 2012 xulka qaranka Italy.
* Spain ayaa noqotay xulkii ugu horeeyay ee difaacda koobka qaramada yurub, islamarkaana seddex koob oo waa weyn oo isku xiga qaata. Koobkaan waa koodii seddexaad ee Euro waxaana ay barbaro la yihiin Germany.
* Guusha afarta gool ah waa guushii ugu weyneyd ee final qaramada yurub ah.
* Vicente Del Bosque ayaa ah tababaraha labaad eek u guuleysta Euro iyo World Cup, isagoo ku biiraya Helmut Schoen, kaasoo West Germany ku hogaamiyay Euro 1972 iyo koobka adduunka 1974.
* Guushii axada waxaa guushii ugu horeysay ee ciyaar caadi ah oo 90 daqiiqo ku dhamaatay ay Spain ka gaarto Italy tartan rasmi ah.
* Weeraryahanka Spain Fernando Torres ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee goolal ka dhaliyay labo final oo Euro ah, waxaana uu sidoo kale ku guuleystay abaalmarinta kabaha dahabka.
* Guuldaradii ugu danbeysay ee Spain ka soo gaartay koobka qaramada yurub waxa ay aheyd 2006dii markaaso kulan isreebreb ah ay 2-0 kaga badisay Sweden, 29 kulan ka dib weli Spain dhinaceeda dhulka lama dhigin.
* Waa markii seddexaad ee xul uu labo gool dhaliyo qeybta hore ee finalka Euro. Italy ayaa sidaasi sameysay 1968dii iyo Czechoslovakia 1976dii.
* Goolhayaha Spain Iker Casillas ayaa ah ciyaaryahanka labaad ee wadankiisa kabtan u noqda seddex koob oo waa weyn sida Euro iyo World Cup, waxaa sidaasi hadda ka hor sameeyay Franz Beckenbauer.
* Casillas ayaa sidoo kale ah ciyaaryahankii ugu horeeyay ee 100 guul la gaara xulka wadankiisa, waxaana uu shabaqa gool ka ilaalshay 76 kulan 136 kulan oo uu guud ahaan u saftay La Roja.
* Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Spain David Silva ayaa si toos ah ugu lug lahaa shan gool ciyaaraha Euro 2012 (2 gool, iyo 3 caawin), waana in ka badan ciyaaryahan kale waxa uu sameeyay.
* Goolhaye Gigi Buffon ayaa dhaafay rikoorka Dino Zoff ee ugu safashada badan ciyaaraha Euro iyo koob adduun isagoo saftay kulankiisii 25aad. Waxa uu Buffon haatan ka danbeeyaa kaliya Paolo Maldini (36) iyo Fabio Cannavaro (26).